Fahadisoana lehibe momba ny varotra 3 voalohany | Martech Zone
Alakamisy Febroary 4, 2016 Alarobia, Febroary 3, 2016 Mark Montini
Fa maninona ianao no nanomboka ny orinasanao? Alefako ny toeram-pambolena fa "satria te-ho mpivarotra aho" dia tsy valinao. Na izany aza, raha toa ianao ka manana tompona orinasa kely an-jatony niarahako niasa taminao dia mety nahatsapa 30 segondra taorian'ny nanokafanao ny varavaranao fa raha tsy lasa mpivarotra ianao dia tsy ho tompona orinasa kely nandritra ny fotoana ela be. Ary, raha lazaina ny marina, dia mahasosotra anao izany satria tsy tianao ny varotra ary manelingelina anao amin'ny faritra hafa amin'ny orinasanao izany.
Manana vaovao tsara aho. Na dia tsy misy fomba hanafoanana ny filànao hivarotra ny orinasanao aza dia azonao atao ny manafoana ny fahasosoranao amin'ny alàlan'ny famahana ireo lesoka telo lehibe hitako fa ataon'ny orinasa.
Fahadisoana # 1: Mifantoha amin'ireo metatra diso
Ny habetsaky ny angon-drakitra misy ahafahana manadihady ny varotra ankehitriny dia ny mampieritreritra. Google Analytics, irery, dia manome data be dia be mba hahafahanao mihinana mandritra ny faran'ny herinandro amin'ny famakafakana azy - vao hahita azy io amin'ny farany dia mitarika fehin-kevitra mifanohitra arakaraka izay angon-kevitra ataonao laharam-pahamehana. Ary izany fotsiny ny angona ho an'ny tranonkalanao! Ny fanaovana tatitra momba ny dokambarotra niomerika, ny media sosialy ary ireo faritra hafa amin'ny varotra dia manafintohina sy mifanipaka ihany koa.
Ny fananana fidirana amin'ireo data rehetra ireo dia zavatra tsara, saingy afaka manelingelina ny tompona orinasa kely amin'ny angona tena manandanja izy io. Izany no antony maha-zava-dehibe ny fanenanana ny fifantohanao mankany amin'ireo metatra roa ihany izay manandanja amin'ny resaka marketing: Vola ahazoana mpanjifa sy sandan'ny androm-piainan'ny mpanjifa. Raha olana ny fikorianan'ny vola dia te-hifantoka amin'ny sandan'ny mpanjifa isam-bolana na isan-taona ianao fa tsy ny lanja mandritra ny androm-piainana, fa ny fitsipika fototra dia mitovy. Raha toa ny sandam-bola (izany hoe fidiram-bola) an'ny mpanjifa lehibe kokoa noho ny vidiny hahazoana mpanjifa dia salama tsara ianao. Ny orinasa mahasoa dia tsy miorina amin'ny metrika tsy misy dikany toa ny tsindry, ny fahatsapana ary ny tiana. Ny orinasa mahasoa dia miorina amin'ny alàlan'ny fandrefesana izay azo apetraka ao amin'ny banky, ka ampifantohy amin'ireo.
Fahadisoana # 2: Mifantoha amin'ireo tetika diso
Azo antoka fa tsy misy tsy fahampiana taktika sy fitaovana hampiasan'ny orinasa madinidinika ny dolara ara-barotra ankehitriny. Mampalahelo fa orinasa madinidinika be loatra no tsy misarika afa-tsy amin'ny tetika lamaody ary tsy miraharaha ireo tetika marketing tena ilaina. Mampifantoka ny fotoanany sy ny volany amin'ny tetikady izay miteraka fitiavany, mpanaraka ary manokatra izy ireo nefa tsy raharahiany ny tetika tena ilaina dia mitarika fiovam-po, fitazonana ny mpanjifa ary laza malaza amin'ny Internet izay miteraka dolara. Ny valiny dia drafitra ara-barotra izay mitazona azy ireo ho be atao sy hahatsapa ho tsara nefa fanambarana fidiram-bola izay mahatonga azy ireo marary amin'ny vavoniny.
Raha tokony hanenjika ireo fironana varotra mafana indrindra rehetra ianao, ny tompona orinasa kely dia tokony hifantoka amin'ny fampitomboana bebe kokoa ny vola miditra amin'ireo mpanjifanao efa misy, amin'ny fampitomboana ny isan-jaton'ny fitarihana lasa mpanjifa, ary ny fanomezana traikefa ho an'ny mpanjifa izay miteraka mpankafy korontana. Ireo ilaina indrindra no fototry ny orinasa mahasoa, tsy misy fihenjanana. Azo antoka fa tsy hahatonga ny orinasanao ho mangatsiatsiaka toy ny fitsambikinana amin'ny haino aman-jery sosialy vaovao mafana indrindra, fa hahazo vola ianao - ary tsy izany ve no antony nanombohanao ny orinasanao tamin'ny voalohany?
Fahadisoana # 3: Mifantoha amin'ny marika diso
Nandritra ny folo taona lasa, ny fahefana hamaritana ny marika 'orinasa dia nifindra avy amin'ny orinasa ho an'ny mpanjifa. Folo taona lasa izay ny orinasa dia nanao fanazaran-tena mahavariana mba hamaritana ny marika ary avy eo nanondrana varotra mba hilazana amin'ny mpanjifa izay noheverin'izy ireo ho marika. Niova daholo izany. Amin'izao tontolo ankehitriny izao, ny mpanjifa dia mamaritra ny haitao misy ny orinasa sy ny haitao ary ny haino aman-jery sosialy hilazana ny orinasa - ary koa mpanjifa hafa an-jatony, raha tsy an'arivony - inona marina ny marika. Ary ataon'izy ireo 24/7/365.
Mampalahelo fa ny ankamaroan'ny orinasa (na lehibe na lehibe) dia tsy nahavita nampifanaraka ny varotra nataony mba hanehoana an'io fanovana io. Manohy mifantoka amin'ny marketing amin'ny fitenenana sy fivarotana izy ireo. Mandefa mailaka be indrindra, karatra paositra modely ary miankina amin'ny fihenam-bidy hitazonana ny mpanjifany izy ireo. Ireo marika nofaritan'ny mpanjifa, etsy ankilany, dia mifantoka amin'ny traikefan'ny mpanjifa sy ny fifandraisany ny marketing. Izy ireo dia mandefa naoty fisaorana, mailaka mahafa-po ary manome traikefa an-tsarimihetsika manerantany hitazonana ny mpanjifany.
Ny taktika dia mitovy, fa ny fifantohana kosa tsy mitovy. Atombohy amin'ny famaritana ny traikefa tianao hampitaina amin'ny mpanjifanao ary avy eo atsangano ny varotrao manodidina ny fampiroboroboana izany traikefa izany sy ny asanao manodidina ny fandefasana azy. Tsy misy maharatsy ny manapa-kevitra ny amin'izay tadiavinao ny marikao, fa amin'ny faran'ny andro dia ny mpanjifa no manapa-kevitra raha izany no tena izy.
Tags: marikamailaka marobefitazonana ny mpanjifafihenam-bidyGoogle AnalyticsLeadsmetatra marketingtetika marketingfironana marketinghaino aman-jery sosialyteknolojiakaratra paositra modely
Mark Montini no Chief Officer Officer ao Tetikasa m2M, orinasam-pivarotana franchise monina any Atlanta izay manampahaizana manokana amin'ny fampidirana stratejika, marketing, ary data ho fampiroboroboana ny làlan'ny mpanjifany. Fantatra amin'ny fahaizany mamolavola fandaharan'asa ara-barotra mizara tanteraka, Mark dia nanampy franchise, orinasa Fortune 500, startup, non-profit, ary na ireo fikambanana politika aza mampitombo ny vola miditra.